Maxaa ka jira in ciidamada dowladda ay weriye ku jir dishay Dhuusamareeb? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in ciidamada dowladda ay weriye ku jir dishay Dhuusamareeb?
Maxaa ka jira in ciidamada dowladda ay weriye ku jir dishay Dhuusamareeb?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ciidamadii Dowladda Soomaaliya ee dhawaan gaysay Magaalada Dhuusmareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa maanta nin Wariye ahaa ku jirdilay magaaladaasi, ka dib markii ay ka qabteen bartamaha magaalada.
Ciidan uu watay Taliye Ku xigeenka Ciidamada Dowladda ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb, Maxamed Gaanyac Cabdulle ayaa Wariye Saciid Cismaan Gabeyre ka qabtay bartamaha magaalada. Ciidankan ayaa Wariyaha ku jirdilay Xarunta Shirkoole, oo ay ka degan yihiin magaalada.
Maxamed Axmed Cali oo ay ehel yihiin Wariyaha ayaa sheegay inaanay u sheegin Ciidamada Haramcadka loo yaqaano waxa ay ku haystaan Wariyaha.
“Anaga manaqaano waxay ku xireen, iyana nooma sheegin. Maanta ayay ka dhex qabteen asagoo magaalka dhex socdo, xabsi ayay gaysteen, oo ay ku jirdileen.” Ayuu yiri Maxamed Axmed Cali.
Maxamed Axmed ayaa xaqiijiyay in Ciidanka Hay’adda Nabad Suggida ee Galmudug ay soo sii daayeen Wariyaha, ka dib markii Ciidamada Haramcadka ay weydiiyeen waxa ay u soo xirteen.
“Ciidamada waxaa u yimid Nabad Suggida Galmudug waxayna weydiiyeen sababta ay Wariyaha u xireen, markii ay garan waayeen waxay ku jawaabaan ayay yiraahdeen anaga nooma xirno, ee wata haddii aad rabtiin. Sidii ayay Nabad Suggida dib ugu soo celisay xoriyadiisa.” Ayuu yiri Maxamed Axmed oo la hadlay mareegta Halqaran.com.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ciidamada Haramcadka ay Madaxtooyada Somaliya ka helayn amarka ay ku soo xireen Wariye Saciid Cismaan Gabeyre, sababo ku aadan Wariyaha oo maalmo ka hor warbixin ka diyaariyay galaangalka dowladdu ku leedahay doorashooyinka lagu wado in ay Galmudug ka qabsoomaan.
Nabadoon Cabdi Guure oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee reer Galmudug ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Suxufi dalka iyo dadka u adeegaya lagu xadgudbo, isagoona ku baaqay in la joojiyo tacadiyadda ka dhanka ah Saxafiyiinta.
Nabadoon Guure oo la hadlay Halqaran.com ayaa sheegay in dowladda hadda jirta ay la soo baxday habdhaqan ka duwan dowladihii hore, isla-markaana ay beegsato cid kasta oo tooshta ku iftiimisa meelaha ay gacmaha kula jirto.
Villa Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa in ay caburin ku hayso Wariye-yaasha Soomaaliyeed, kuwooda madaxabannaan, iyadoo aan dulqaad u lahayn dhageysiga wararka liddiga ku ah.
Odayaasha dhaqanka reer Galmudug
Weriye lagu jirdilay Dhuusamareeb